काठमाडौं । सेवा अवधि एक वर्ष बाँकी छँदै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक डा. वैद्यनाथ महतोले जागिर छाडेका छन् । विवादास्पद छविका डा. महतोलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानिएपछि त्यही झोकमा राजीनामा दिएर उनी हिँडेका हुन् ।
तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र यादवको पालामा नार्कका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन सफल भएका डा. महतोले त्यसपछि पनि लामै समय निमित्त चलाउँदै आएका थिए । तर, नार्कको कार्यकारी निर्देशक भएपछि उनले विभिन्न विवादास्पद कार्यहरू गरे । उनलाई वर्तमान मन्त्री चक्रपाणि खनालले हटाउन खोजे पनि सफल हुन सकेका थिएनन् । तर, केही दिनअघि भने डा. महतोलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर नार्कको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डा. दिलबहादुर गुरुङलाई दिइएको थियो ।
आफूलाई नार्कको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानिएपछि अपमान गरेको महसुस गर्दै डा. महतोले राजीनामा दिएका हुन् । उनको जागिरेको अवधि एक वर्ष बाँकी थियो । तर, आफूभन्दा कनिष्ठलाई कार्यकारी निर्देशक दिएर मन्त्रालयमा हाजिर गराएपछि उनले त्यही झोंकमा राजीनामा दिएको बताइन्छ ।
नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा रहँदा डा. महतोले केही विवादास्पद कामहरूसमेत गरेका थिए । केही समय पहिले वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीहरूको अनावश्यक लर्को लाग्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गरेका थिए । तर, नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा रहँदा डा. महतोले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई लत्याउँदै मोरक्कोको भ्रमण गरेका थिए । मोरक्कोको एउटा कार्यक्रममा नार्कका केही कर्मचारीहरूलाई निम्ता आएपछि डा. महतोले आफ्नै नेतृत्वमा उक्त भ्रमण गर्ने प्रबन्ध मिलाएका थिए । तर, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उल्लंघन हुने ठानी डा. महतोको भ्रमणलाई स्वीकृति नदिएपछि उनी बिदा मिलाएर मोरक्को गएका थिए । बिदा लिएर मोरक्को गएपछि उनलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो । तर, उनले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि मन्त्री खनालले उनलाई जिम्मेवारीमुक्त तुल्याउन चाहेका थिए । अहिले उनलाई नार्कको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानेपछि राजीनामा दिएर आफैं हट्न पुगेका छन् ।